पुरा होला त नेपाल औषधि लिमिटेडको सपना ? - Aarthiknews
पुरा होला त नेपाल औषधि लिमिटेडको सपना ?
नेपाल सरकारको अधिनमा नेपाल टेलेकम, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, नेपाल आयल निगम सहित दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरु रहेकाछन ति मध्येका एक हो नेपाल औषधि लिमिटेड । हुन त नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण जस्ता केहि संस्थान बाहेक प्रायः जस्तोको अवस्था दयनीय छ र पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड विस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ ।
विगतमा १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने औषधि लिमिटेड सिटामोलमा मात्रै सिमित भएको अवस्थामा यतिबेला स्यानिटाइजर, ग्लिसिरिन र डिस्टिल वाटर उत्पादन गर्दै आएको छ । र, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लक्ष बोक्दै अघि बढेका छन् , नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाह ।
सफिउल्लाह लिमिटेडलाई जीवित तुल्याउन मात्रै होइन, विश्वबजारमै प्रतिस्पर्धि बनाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाईरहेका छन् । सन् १९७२ मा १४६ वटा औषधिहरु उत्पादन गर्दै स्थापित भएको सरकारी कम्पनीे, नेपाल औषधि लिमिटेडे अहिले भने जम्मा ६ वटा मात्रै उत्पादनमा सिमित छन् । सिमित उत्पादन भएपनि कोरोना माहामारीको बेला देशैभरि सिटामोल र जीवनजल घाटामा समेत आपूर्ति गर्न सक्ने मुख्य कम्पनि बनेका छन् । कोभिडको कहरमा नेपालको दुर्गमदेखि सुगमसम्म नेपाल औषधिले आफ्नो उत्पादन सरकारी तथा गैर सरकारी विभिन्न संस्थाका माध्यमहरुबाट आपूर्ति गर्ने गरेको ठहर गर्छन्, महाप्रबन्धक सफिउल्लाह ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले स्थापित गरेको नजिरलाई पछ्याउँदै अर्को एउटा सरकारी निकाय मार्फत नयाँ उदाहरण थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो निकाय हो, नेपाल औषधि लिमिटेड । कुलमानले सरकारी संस्थानको विकास आयाममा एउटा बिन्दु थपेको तर त्यसले बिकाश सुनिस्चितता अभियानमा विस्तृत तथ्यांक दिन सक्दैन बरु नेपाल औषधिको योजना सफल भए देशको लागि यो ठुलो अनुसन्धानको बिषय पनि बन्न सक्छ र अन्य संथाको बिकासको नजिर बन्दैन अरु सस्थाको लागि थप उर्जा प्रदान गर्ने छ भन्ने सफिउल्लाहको बुझाई छ ।
आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यन्तै कम उत्पादन गरेको कारण लामो समयसम्म आर्थिक अभावमा रहयो, यो कम्पनी । जसका कारण त्यसको नेतृत्वकर्ताहरु हरेक तीन तीन महिनामा कर्मचारीका लागि तलब उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्दै अर्थ मन्त्रालय धाउन बाध्य थिए ।
तर, गएको हिउँदमा सो कम्पनीको जनरल म्यानेजरकारुपमा सफिउल्लाह नियुक्त भएपछि उनले यो कम्पनीलाई नयाँ अवतारमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, उनका अगाडी तेर्सिएका तगाराहरु छिचोल्न भने त्यति सहज देखिदैन ।
सबैभनदा पहिले उत्पादनको प्राथमिकतालाई निर्धारण गरेर तीन चरणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् । जस अनुसार पहिलो चरणमा हाल उत्पादन भइरहेका औषधिहरुको उत्पादनलाई अझ तिव्र्ता दिँदै सरकारले निशुल्करुपमा वितरण गर्दै आएका आधारभूत औषधिहरुको आपूर्ति यहि कम्पनीमार्फत गर्ने उनको योजना छ ।
दोस्रो चरणमा भने कतिपय उत्पादनहरुलाई मूल्य र सम्भाव्यताको आधारमा बृद्धि गर्ने योजनामा रहेका उनले तेस्रो चरणमा उच्च मूल्ययुक्त उत्पादन र सेवाहरु विस्तार गर्ने कार्ययोजना तय गरेका छन् । जसका लागि उनले पाइपलाइनमा १८ प्रकारका औषधिहरु अनुसन्धान र विकास सकिएर पनि उत्पादन थालिहाल्नेगरि सूचीकृत गरेका छन् ।
सो योजना अन्तर्गत हेमोडायलाईसिसको लागि आवश्यक पर्ने उत्पानहरुको लागि त प्लान्ट नै स्थापना भइसकेको छ । अबको तीन महिनामा यसले आफ्नो उत्पादन थाल्ने उनले बताए । र, यो युनिटको उत्पादनले एकचोटिको उपचारमा लगभग एउटा बिरामीलाई १८०० रुपैया को सहुलियत हुनेछ । त्यसैगरि, उनको योजनामा क्याप्सुल र मलम उत्पादन गर्ने प्लान्टहरु पनि चाँडै नै स्थापना गर्ने तयारी रहेको सफिले जानकारी दिए ।
यो भयो छोटो अवधिकालागि देशको लागि चाहिने अति आवस्यक औषधि आपूर्ति गर्ने योजना । यो बाहेक उनको एउटा बृहत योजना पनि छ, त्यो हो हाल औषधि लिमिटेडको स्वामित्वामा रहेको ४३ रोपनि जग्गामा नेपाल औषधि कम्प्लेक्स बनाउनु । व्यवसायि, योजनाबद्ध, संगठित र ब्यबस्थित औषधि बजारको विकाशगरिे औषधि हबका रुपमा स्थापित गर्ने र देशलाई नै विश्व स्तरमा पहिचान दिलाउनु नेपाल औषधिको उदेश्य हो ।
दिर्घजीवि योजना अगाडी, औषधि उत्पादन युनिटको लागि उनले आबुखैरेनीमा रहेको गोरखकाली टायरको जमिनलाई औषधिहरुको उत्पादनदेखि पानी प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने चाजोपाजो पनि मिलाइरहेका छन् ।
सफिका योजना अनुसार नेपाल औषधि कम्प्लेक्समा नेपालका सबै प्रमुख औषधि उत्पादकदेखि बिक्रेतासम्मको लागि कर्पोरेट कार्यलयदेखि पसलसम्म सञ्चालन गराइनेछ । जसले गर्दा नेपाल औषधि लिमिटेडको कालो इतिहास फेरि कहिले नदोहोरिनेगरि आर्थिकरुपमा त यो कम्पनीको कायापलट हुनेनै छ । नेपालमा औषधिको उत्पादन र बिक्रीको क्षेत्रमा नयाँ आयाम समेत थपिने उनको विश्वास छ ।
औषधि सेवा देश र जनताकोलागि चाहिने अति जरुरी सेवा पनि हो । देशकै मुख्य औषधि बजार भनेको काठमाडौँ हो र काठमाडौँका थोक औषधि पसलहरु गल्लि भित्र रहेकाले सेवा तथा उपलब्धता गुनास्तारियता कमि देखिनु स्वाभाविक हो । यो अवस्थामा नेपाल औषधि मेडिसिन कम्प्लेक्स नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको विषय बन्न सक्छ ।
जनरल म्यानेजर सफि यसमा सरकारले थप खर्च गर्न नपर्ने बरु अनुमति मात्र्र दिए पनि औषधि उत्पान गर्नेदेखि लिएर भवन निर्माण गरि त्यसबाट करौडो आय गर्ने योजना आफूसँग रहेको बताउँछन् । यो योजनाले नागरिकलाई सस्तो र सुलभ मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि सेवा दिनुको साथै देशको आर्थिक भारमा समेत सहयोगी हुने देखिन्छ । साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ३०,००० भन्दा बढी नेपालीले देशमै रोजगारी पाउने अवसर पनि बन्ने छ । सरकार र सरोकारवाला निकायसँग उनको यतिमात्र आग्रह छ की अनुदान र आर्थिक सहयोगमा प्राप्त भएका मेसिनहरु राखेर लिमिटेडले चाहेको औषधि उत्पादन गर्ने अनुमति दिइयोस् ।
औषधि नियामक निकाय औषधि वयवस्था विभागसँग कम्तिमा पनि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरुको उत्पादन अनुमति दिइयोस् भने उनको आग्रह छ । उनका प्रयत्नहरुलाई औषधि व्यबस्था विभागले एउटा सरकारी निकाय भएको अनुभूति गरि औषधि व्यबस्था बिभाग समेत देशलाई नै नया पहिचान दिने योजना भएकोले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत र व्यबहारमा सहयोगी देखिए पनि संस्थागत व्याबहारिक रुपमा थप सहयोगको अपेक्षा गर्दछन्, सफिउल्लाह ।
उता, औषधि व्यवस्था विभागक महानिर्देशक नारायण ढकाल भने आफू नियामक निकायको जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा सरकारी र निजि भनेर काखा र पाखा गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनको सिधा जवाफ छ, ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर आयो भने जो कोहिलाई उत्पादन अनुमति दिन्छौं । अझ सरकारी कम्पनीले नै म गर्छु भन्दा हामीले सहयोग नगर्ने कुरै आउँदैन ।
चार महिनामा मात्र बिगत १८ वर्षको इतिहासलाई मात दिनसक्ने अहिलेको नेपाल औषधिको भावी योजना हेर्दा नेपाल औषधिको सफलतालाई सकारात्मक देख्न सकिन्छ । यो योजनाले नेपाल औषधिका सम्पूर्ण कर्मचारीमा हर्ष र उल्लासका साथै नया जोश र जाँगर थपेको देखिन्छ । बिहान ४ बजेदेखि बेलुका १० बजे सम्म उत्पादनमा व्यस्त देखिन्छन्, यहाँका कर्मचारीहरु । काममा को ठुलो को सानो ? कुनै भेदभाव छैन । सबै आ-आफ्ना दायित्व पुरागर्न व्यस्त छन् । र पनि एउटा प्रश्न निरुत्तर छ , के पुरा होला त नेपाल औषधिको सपना ?